हेट घर ,नजिकै हिँड्दै गर्दा ३ करोड रुपैयाँको डल्लोमा ठे’स लाग्यो, छिमेकीले मूल्य भन्दा सा’तो गएर तनाव ,…. « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं। एक महिला आफ्नो घरनजिकै हिँड्दै गर्दा उनलाई एउटा डल्लोमा ठे’स लाग्यो । उनलाई त्यो डल्लो के हो भन्ने थाहा भएन । तै पनि उनले त्यो डल्लोले आफ्नो लागि केही पैसा दिलाउन सक्ने आशामा त्यसलाई घि’सार्दै आफ्नो घरनजिकै लिएर गइन् । जब उनले त्यो डल्लोको मूल्य थाहा पाइन् त्यसपछि भने उनको सा’तो गयो ।
डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरी २३ का दिन थाइल्याण्डको ना’खोन सी था’म्मा रात प्रान्तको समुद्र किनारमा सि’रिपो’र्न नि’यामरिन नामकी ४९ वर्षकी महिलाले एउटा ठूलो ड’ल्लो समुद्रको पानीले प’खालिँदै गरेको अवस्थामा भेटेकी थिइन् । नजिकैबाट हेर्दा उनले त्यो ड’ल्लोबाट माछाको ग’न्ध आइरहेको थाहा पाइन् । त्यसपछि उनले त्यो डल्लो घि’सार्दै घर ल्याएकी थिइन् ।
ए’म्बरग्रिस अत्यन्तै दु’र्लभ पदार्थ हो र यो प’रफ्युम बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यदि मैले भेटेको वस्तु साँच्चिकै ए’म्बरग्रिस रहेछ भने यसलाई बेचेर मैले मेरो स’माजलाई मद्दत गर्न सक्छु’ उनले भनिन् । यस्तो ठूलो टुक्रा भे’ट्टाएकोमा म भा’ग्यमानी म’हसुस गर्छु। मलाई आशा छ यसले मलाई केही पैसा दिलाउनेछ । म यसलाई आफ्नो घरमा सु’रक्षित राखेकी छु र मैले स्थानीय प’रिषद्लाई जाँ’च गर्न आग्रह गरेकी छु।’
स्प’र्म ह्वे’लले केही खाँदा ति’खो र ठूलो वस्तु भित्र छि’र्न नदिन उसको आ’न्द्रामा रहेका पि’त्त नलीले एक किसिमको स्रा’व बनाउँ छन् । पछि ह्वे’लले यो मु’सिलेजलाई बा’न्ता गर्छ जुन पछि कडा हुन्छ र समुद्रको सतहमा तैरिन्छ । यो ठो’स डल्लोमा सुरुमा दुर्गन्ध हुन्छ तर मु’सिलेज सुकेपछि यसले मिठो र लामो समयसम्म रहने सु’गन्ध विकास गर्छ, जसले यसलाई अ’त्तर उद्योग अत्यन्तै आवश्यक त’त्व बनाउँछ ।
तपाइको बानि यस्तो छ भने आजै हटाउनु होस् ! यस्ता ५ विषय अशुभ मानिन्छ !